Akwaaba ɛba Twi Wikipedia so!
Mprenpren yɛwɔ atwerɛsɛm bɛyɛ 1,547 ɛwɔ Twi kasa mu.
Kojo Oppong Nkrumah ( Nawoda ne Oforisuo da etɔ so 5, afe 1982) yɛ Ghanani amanyɔni ne mmaranimfoɔ . Ɔyɛ mmarahyɛbeguani a ogyina hɔ ma Ofoase-Ayirebi abatoɔ mpesua so.Wɔ woo Kojo Oppong Nkrumah wɔ Koforidua a ɛwɔ apuei fam wɔ Ghana. Nawofo ne Kwame Oppong Nkrumah ne Felicia Oppong Nkrumah. Na ne maame yɛ ɔkyerɛkyerɛfo na na ne papa nso kyerɛ ade nanso, akyire ogyae ade kyerɛ kɔyɛɛ adwuma wɔ sika korabea.
Della Sowah (wɔ woo no November da ɛtɔ 23, afe 1959) yɛ Ghanani soafo abediakyire ma bobeasu, mmɔfra ne ahobammɔ asoeɛ. Ɔsan nso yɛ mmarahyɛ baguani a ogyina hɔ ma Kpando mpɛsua so. Wɔ woo Sowah wɔ Kapndo a ɛwɔ Frao mantam mu wɔ August da a ɛtɔ so 23, afe 1956 mu.
Sika Dwa Kofi a esi Hwedɔm Dwa so wɔ afe apem ahankro aduasa-nnum (1935) mu.
Sɛ Okomfo Anokye na ɔfrɛɛ Sika Dwa no efirii wiem ma no besii Asantehene a ɔdikan, Osei Tutu ɛserɛ so? Wonim sɛ saa berɛ no mu no, na ahenwa bi saa ɛdan amammerɛ ahyɛnso soronko a ɛfa ɔhene biara amamuo ho, nanso dodoɔ no ara gyidi sɛ Sika Dwa Kofi ɛyɛ ahyɛnso bi a na Asantefoɔ - wɔn a wɔte aseɛ, wɔn a wáwu ɛne wɔn a afei na yɛrebɛwo wɔn nyinaa homhom ɛwɔ mu.?
Sɛ Yaa Asantewaa na ne nua barima Nana Akwesi Afrane Opese a ɔyɛ Ejisuhene na ɔpaw no. ɔdii Asantefoɔ ko a yɛfrɛ no sikadwa ko na yɛsan frɛ no Yaa Asantewaa ko a atia Abrɔfo a wɔdi yɛn so?
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Kratafa_Titiriw&oldid=31697"
Nsesae ba kratafa yi so da 9 Ɔpɛnimma 2021, mmere 20:27.